डा.गोविन्द केसीको बारम्बारको अनसनलाई जनताले कसरी हेरेका छन्?
रामकला खड्का शुक्रवार, साउन २७, २०७४ 2787 पटक पढिएको
देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कार्यान्वयन भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । यी तीनै कुराको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने लडाइँ नै डा. केसीको अनशनको माग हो। त्यसैले राज्यले पनि उनका मागहरूको सुनुवाइ गरेर तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
यशोदा तिम्सिना, आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
उहाँ बारम्बार यसरी अनशन बस्नु परेको परिस्थितिले हाम्रो देशको दयनीय अवस्था जनाइरहेछ ! उहिल्यै निर्णय भइसकेको कुरा सरकारबाट व्यवहारमा कुनै कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । जुनै आए पनि कानै चिरेको भन्ने देखायो। सत्य कुरा बोल्ने एक दुईजना मान्छे भनेको पनि असल नागरिकका निम्ति ठूलो शक्ति र आड हो !
सुलोचना मानन्धर, निवर्तमान परिषद् सदस्य, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान
मेडिकल शिक्षा तथा समस्त स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी यत्रो दिनदेखि आमरण अनशनमा बसिरहँदा पनि सरकारलाई वास्तै छैन। उहाँलाई केही भयो भने को जिम्मेवार?
बारम्बार माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने तर पूरा नगर्ने अनि बारम्बार अनशन बसिराख्नुपर्ने? आखिर स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा किन यत्रो लापरबाही? छिटोभन्दा छिटो सरकारले माग पूरा गर्ने ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ।
सुधा सुवेदी, सीईओ, इन्टरनेसनल युथ क्याम्प्स
एउटा पागल आको छ
त्यही डा. केसी भाको छ
किन गर्छौ हडताल यहाँ
स्वस्थ नेता पाको छौ ।
कति पागल उदाए यहाँ
कति पागल अस्ताए यहाँ
तर एउटा डा. केसी छन्
धेरै पागल जुटाए यहाँ।
होमराज श्रेष्ठ, व्यवसायी
डा. केसीको अनशनलाई लिएर वाद-प्रतिवादका शृंखला चलिरहेका छन्। तर, डा. केसी पटकपटक अनशन बस्नुहुँदा पनि उहाँका मागलाई सम्बोधन गर्नेतिर राज्यले तत्परता देखाइरहेको छैन।
त्यसैले अब सम्बोधन गर्नसक्ने जति माग सम्बोधन गर्नमा राज्यले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। वार्ताबाटै समस्याका डोबहरू मेटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ।
विवश वस्ती, साहित्यकार
सार्वजनिक हितका लागि डा. गोविन्द केसीले अनशन बस्दै गर्नुभएका न्यायिक मागहरू जायज छन् । नेपाली जनाताको उहाँलाई साथ पनि छ।
उहाँका मागहरू सरकारले पूरा गर्ने हो भने नेपालले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार र अहिले नेपाली जनाताले भोगिरहेका गलत उपचार र औषधिका साथै अन्य उपचार समस्याहरू झेल्नु पर्दैन थियो कि जस्तो लाग्छ।
श्रुति राज्यलक्ष्मी सिंह, गायिका
डा.गोविन्द केसीका माग आमनेपाली जनताका लागि जायज छन्। नेपाल र नेपालीका लागि एक्लै यति साहस गर्नु धेरै ठूलो कुरा हो।
तर, नेताहरूलाई लाग्ला कि अस्पतालमा भएकाले गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारणले ती माग पूरा नहुने देखिन्छ। डा. केसीको अनशनकै क्रममा मृत्यु भएमा यिनै नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ।
निर्जन थापा, नायक
डा. गोविन्द केसीको अनशनका सम्बन्धमा उहाँका केही जायज माग अवशय सम्बोधन हुनुपर्छ। तर, अनशनका नाममा कसैले व्यक्तिगत जिद्दी पूरा गराउन खोज्नु भने राम्रो मान्न सकिँदैन।
समयअनुसार कुनै पनि कुरा फेरबदल हुनसक्छ। माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई पनि सबै पक्षको सहमति हुने गरी परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्छ।
विश्वमा हाल हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएकोमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्नु पनि राम्रो मान्न सकिन्न।
प्रह्लाद दाहाल, सचिव, एन प्याब्सन
डा. गोविन्द केसी आफ्नो लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीको हितका लागि अनशन बस्नुभएको छ। विदेश तथा नेपालका निजी कलेजमा महँगो शुल्क तिरेर एमबीबीएस र एमडी पढ्न धेरै नेपालीले नसक्ने भएकाले आवश्यकता अनुसारको सरकारी कलेज स्थापना गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण नेपाली जनताले शिक्षा हासिल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको विचारसँग म सहमत छु।
सावित्री शाही, विद्यार्थी
जनता र विद्यार्थीको भलाइका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन चाहिन्छ, माफिया र नेताहरूको स्वार्थअनुरूप होइन ।
गोविन्द अधिकारी, आईटी प्रोफेसनल
शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : भारतसँग कुरा गर्न किन डराउने? 2829
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलार्इ प्राथिमकता, यस्तो छ तयारी 1218
नेपाल-भारत सम्बन्ध : सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन 4529
'एमालेलाई सिध्याउन कांग्रेससँग सहकार्य' 44070
सप्तरीमा नदी नियन्त्रणको लगानी बालुवामा पानी 1651
ट्रम्प प्रशासनद्वारा दक्षिण एशियामा पहिलो पटक नेपालका लागि ५० करोड डलर स्वीकृत 24141
दिल्लीसँग बार्गेनिङको हैसियतमा नेपाल 386
राष्ट्रियताको बहस 398
नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता भण्डारीद्वारा शपथ ग्रहण 707
नयाँशक्ति छाडेका नेता 'माओवादीतिरै' 6728
प्रिन्सिपलसँगको अवैध सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएपछि ट्‍वाइलेटमा लगेर हत्या.. 27134
खोलाको किनारमा शव भेटियो 353
आमा–आमा भन्दा भन्दै नातिनीलाई हातैबाट बाढीले बगायो.. 7187
आरजुको राहतले भूकम्पपीडित दंग 14062
न्यूनचापीय प्रणालीले मनसुन पुन: सक्रिय, मौसम बद्‌ली भइरहने 2933
काठमाडौंमा इन्टरनेटको नीति, कानूनी प्रयोगबारे सेमिनार सुरु 353
बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा सामाजिक सञ्जाल 1388
बाढीपीडितलाई निशुल्क टेलिफोन सेवा 4393